Burmese Track - Eucharistic Congress
Marriott - Jet Stream Room
မြန်ြာဘာသာမြင်ို့က ိုယ်တတာ်မြတ်စက်ကရြင််းတူတ ိုင်ဆို င်ရာသွန်သင်ြ ို ို့ဒီလြ််းစဥ်အစီအစဉ် သည်တမခာ်းတသာဘာသာရပ်ြ ာ်းမြင်ို့သွန်သင်သညို့်နည််းတူခရစ်တတာ်ဘိုရာ်းရှင်နှင်ို့ပ ိုြ ိုတလ်း နက်သညို့်ဆက်နွယ်ခံစာ်းြှုရရ ှတစရန်နှင်ို့က ိုယ်တတာ်သည်က ိုယ်တတာ်မြတ်၌အြှန်စင်စစ်တည်ရှတတာ်ြူတ ကာင််းလည််းလက်တတွေ့ွခံစာ်းသက်တသခံန ိုင်ြ ို ို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်တဆာင်ရွက်မခင််းမြစ် ပါသည်။ဒီက ိုယ်တတာ်မြတ်အတ ကာင််းပွဲွတတာ်က င််းပတ ာတမပာမခင််းသည်လူတ ာင်တပါင််းြ ာ်း စွာပါဝင်ပပီ်းခရစ်တတာ်ဘိုရာ်းရှင်ရွဲ ို့ကျွန်ိုပ်တ ိုနို့ ှင်ို့အတူကပ်ကြဘာကိုန်သညို့်တ ိုင်တအာင်ရ ှတတာ်ြူ ြညို့်အတ ကာင််းြ န် ို့ ွက်သွန်သင်သညို့်တရာ်းတတာ်က ိုလည််းသက်တသခံမခင််းပင်မြစ်သည်။ဒီလ ို ဘာသာစကာ်းအြ ်းြ ်းမြင်ို့က င််းပတ ာတမပာတစမခင််းသည်၊ဘာသာစကာ်းအြ ်းြ ်းတမပာ တသာဘာသာဝင်အာ်းလံို်းတ ို ို့အတွက်ပ ိုြ ိုသ ရ ှနာ်းလည်န ိုင်တစရန်ရည်ရွယ်မခင််းပင်မြစ်သည်၊တာတမပာသူတ ိုင််းအာ်းလံို်းရွဲ ို့သွန်သင်တ ာတမပာြှုတတွက ိုလည််းနာယူြှတ်တစြ ို ို့ရန်မြစ်တပသည်။
This track, along with all the others from our Eucharistic Congress have the purpose of creatingadeeper connection with Jesus and his Real Presence in the Eucharist. This event isagathering of thousands of believers which celebrates the enormous gift of Jesus Christ present to us as he promised he would be, “Until the end of time.” Some tracks, like this one, are set up to be language specific so that the diverse population of our local Church has full access, in their native tongue, to the speakers who are invited to participate.
Father Salai “Robert” Zaw Lwin, M.S.
Rev. Mr. Martin Ma Na Ling
Rev. Mr. Peter Swan